Global Voices teny Malagasy » Goatemalà: Esquipulas sy Rabinal, Marika Roa Anà Fandriampahalemana · Global Voices teny Malagasy » Print
Goatemalà: Esquipulas sy Rabinal, Marika Roa Anà Fandriampahalemana
Voadika ny 02 Aogositra 2017 13:13 GMT 1	 · Mpanoratra Renata Avila Nandika Tantely
Sokajy: Amerika Latina, Goatemalà, Fivavahana, Mediam-bahoaka
Sarin'ny Cofradia any Rabinal avy tamin'i Renata Ávila
Mankalaza fety maro tena manandanja tokoa ireo tanàna roa any Goatemalà, rehefa volana Janoary. Ny “Esquipulas” sy “Rabinal” ireo fety ireo. Lasa fankalaza ao amin'ny firenena maromaro mihitsy ny Esquipulas ary manintona mpivahiny izay tonga avy any amin'ireo firenena hafa mba hanamasina ilay sarinà Kristy Mainty. Marik'ireo Fifampiraharahàna Fandriampahalemana teo anivon'i Amerika Afovoany ihany koa io. Tena manandanja manokana ilay sarin'i Kristy any Esquipulas araka ny fanazavan'ny Hecho en Guatemala [es] azy ao amin'ny lahatsorany Esquipulas, tanànan'ny finoana 
Sarinà Kristy mifantsika io, izay nanoloran'ireo Amerikàna Tanivo an-tapitrisany tena tato anatin'ny 400 taona farany, ary mitoetra ao amin'ny fiangonana miaraka amin'ny anaran'ilay tanàna malaza. Ilay famaritana hoe “mainty” dia noho ny lokon'ny hazo nanaovana ny sarisokitra lasa maizina (araka ny maro, noho ny setroka avy amin'ireo labozia), ary ankehitriny lasa mainty izy io.
Ao amin'ny departemantan'i Chiquimula no misy an'i Esquipulas, fa tena lasa niitatra hatrany ivelany mihitsy ny finoana sy ny fanolorantena amin'ilay sary, araka ny El nuevo blog de Esquipulas [es] :
Lasa niampita hatrany ivelany ny fanolorantena ho an'ilay Kristy an'i Esquipulas, ary lasa nahatonga an'i Esquipulas ho Renivohitry ny finoana ao Amerika Afovoany, ary lasa sary nampiasain'ireo Katolika Amerikana Latina mipetraka any Etazonia ihany koa io. Natao isan-taona ny fankalazana nentimpaharazana ny Kristy an'i Esquipulas, any amin'ireo firenena maro samihafa any New York, ary nanomboka nankalazaina tao amin'ny Katedralin'i St. Patrick io telo taona lasa izay, noho ireo hetsika nataon'i María Mérida de Mora, kaonsily jeneralin'i Goatemalà any New York ary ny Arsidiosezy Firahalahiana ao amin'i Kristy-n'i Esquipulas any NY. Ankalazaina any New Jersey ihany koa io ary mifarana any Brooklyn ny fankalazana.
Milaza ny eritreritry ny vavy antitra iray ao amin'ny tanànany  mikasika ilay fety i El Zacapaneco [es]:
Ramatoa Clemencia, izay 85 taona, milaza amintsika fa mitsidika an'i Esquipulas miaraka amin'ny fianakaviany izy efa eo amn'ny 20 taona eo izao mba hisaotra an'Andriamanitra manome azy taona iray hafa iainany ary hanombohana iray vaovao. Mametraka ny fanatitrany ao amin'ny “reniranon'ny faniriana” izy mba hivavahana amin'Andriamanitra ho an'ny faniriany izay angatahany mba mety ho tanteraka.
Rabinal no tanàna iray hafa mankalaza Olomasina amim-pientanentanana sy fanehoana be, izay hifangaroana teratany karazany maro mahagaga, Espaniola sy fanehoana malazanà finoana. Isaky ny volana Janoary, mankalaza ny Masindahy San Pablo miaraka amin'ny fetiben'ny “Cofradías”, i Rabinal. Toerana tena niaritra ny mafy nandritra ny fifandonana nitam-piadiana i Rabinal, ary maro amin'ireo fomba nentindrazana no tsy natao nandritra izany fotoana sarotra izany, izay nisiana famonoana faobe tany an-toerana.
Mba hamelomana hatrany ny fahatsiarovana, milaza ny andinindinin'ilay fifandonana ary ireo ezaka lehibe vitan'ny vahoaka hitazona ny fahatsiarovana tsy ho faty i James, ao amin'ny bilaoginy Mi Mundo, satria nanamboatra mozea hitadidiana ireo sisa velona:
Ankoatry ny fitazonana tsy ho faty ny fahatsiarovana manantantaran'ireo habibiana mbola toy ny vao tsy ela akory, manome tolotra hafa maro ihany koa ilay mozea, toy ny tranomboky, fikirakiraina solosaina, ary fampirantiana manokana natolotra ho an’ ny kolontsaina Maya Achi eo an-toerana ary ireo fombandrazany manankarena.
Fa niova ny rivotra. Ankehitriny, mankalaza indray izy ireo. Nilaza ny mpitoraka bilaogy Con sabor a naranja mi dulce Rabinal [es] (miaraka amin'ny tsironà voasary, i Rabinal mamiko) fa noho ireo tolo-tànana, afaka mividy ireo zavatra ilaina amin'ireo fetibe izy ireo. Ao amin'ny lahatsorany La Nación Rabinal, manoritsoritra ny firafitry ny fankalazana izy:
Hoy por hoy la celebración de la feria y fiesta titular en honor a Masindahy Pablo Apóstol, se realiza el ritual en honor al AJAW, Corazón del Cielo y Corazón de la Tierra. (uk`ux kaj jay uk`ux ulew). Lo esencial de nuestra coexistencia sobre la Madre Tierra es la armonía y hermandad con el prójimo y la naturaleza misma de la cual somos parte importante para su protección y conservación…
Amin'izao andro izao izahay mankalaza ny fetibe ho fanomezam-boninahitra an'i Masindahy San Pablo, ary manao ny fombafomba ho fanomezam-boninahitra an'i Ajaw, ny fon'ireo lanitra ary ny fon'ny tany. Ny tena mampandeha ny fiaraha-miainantsika miaraka amin'ny Tany Reny dia ny firindràna sy firahalahiana miaraka amin'ireo hafa, sy ny natiora. Anisan'io natiora io isika, tena zava-dehibe tokoa amin'ny fitahirizana sy fiarovana azy … “
Misy cofradías maro, vondrona mpandihy, teratany no ankamaroany, manao sarontava sy manome voninahitra ireo olomasina Katolika. Anisan'ireo “Cofradías” ireo i San Sebastiana, miaraka amin'ny Bilaoginy manokana [es] , izay ampiakaran'izy ireo ny fandaharan'ireo hetsika, ny cofradía iray hafa manana bilaogy dia i San Pablo [es],  izay amoahan'izy ireo mihitsy ny gazetiboky nomerika mikasika ireo hetsika amin'ilay fetibe.
Ilay tanàna izay nisian'ny herisetran'ny ady nahatsiravina indrindra ary ilay tanàna niantombohan'ny fifampiraharahàna fandriampahalemana, samy manana ireo fombandrazany ireo roa ireo, izay tsy tontan'ny ela. Avondron'izy ireny ny olona, ary avondrony miaraka ny fanevatevàna sy ny finoana Katolika, ireo dihy araham-bavaka ataon'ireo teratany, ary misy loko mainty amin'ilay sary tsara tarehin'i Kristy. Ao anatin'izany rehetra izany, mitondra ny fanantenàna sy hafaliana izy ireo, izay ahitàna loko mandoko ny lanitr'i Goatemalà.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/08/02/104862/
 Esquipulas, tanànan'ny finoana: http://cienporcientochapin.blogspot.com/2008/01/fiesta-en-esquipulas-capital-de-la-fe.html
 El nuevo blog de Esquipulas [es]: http://www.esquipulas.com.gt/~globalbusiness/blog/?p=989
 Milaza ny eritreritry ny vavy antitra iray ao amin'ny tanànany: http://www.elzacapaneco.com/contenido/?p=967
 ny andinindinin'ilay fifandonana : http://mimundo-jamesrodriguez.blogspot.com/2007/08/chixoy-hydro-electrical-dam-and.html
 La Nación Rabinal, : http://milindorabinal.blogspot.com/2008/01/la-nacin-rabinaleb-el-lindo-kaj-yub.html
 Bilaoginy manokana [es]: http://sansebastian2008.blogspot.com/
 San Pablo [es],: http://sanpablorabinal.blogspot.com